DOWNLOAD DeHavilland DHC8-Q 202 ngwugwu n'ihi na FS2004 - Rikoooo
n'ihi na FSX iche iche dakọtara pịa ebe a The Bombardier Dash 8 ma ọ bụ Q Series,
na mbụ maara dị ka ndị de Havilland Canada Dash 8 ma ọ bụ DHC-8, bụ usoro nke ejima-engined, ọkara nso, turboprop airliners. Ẹkenam site de Havilland Canada (DHC) na 1984, ha na-now-amịpụta Bombardier Aerospace. N'ime 1,000 Dash 8s nke niile ụdị na e wuru na Bombardier ịkọ a ngụkọta mmepụta ọsọ nke 1,192 nkeji nke niile variants site na 2016.
The Series 100 nwere a eju 39, ndị Series 200 nwere otu ikike ma awade ọzọ dị ike engines.
Production nke Q200 na Q300 usoro kwụsịrị na 1998 na naanị Q400 a na-arụpụtara ma ọtụtụ narị -100 na -200 nsụgharị anọgide na ọrụ n'ụwa nile.
All Dash 8s napụtara nke abụọ nkeji iri na ise nke 1996 agụnye Ọrụ mkpọtụ na Omume ọma jijiji suppression (ANVS) usoro e mere iji belata ụlọ ụzụ na omume ọma jijiji na ọkwa-fọrọ nke nta ka ndị nke ugboelu airliners. Iji mesie ha ịnọ jụụ, Bombardier renamed Dash 8 ụdị dị ka Q Series turboprops (Q200, Q300 na Q400).
Complete ngwugwu na ụda, VC en nlereanya na Continental repaint, nnọọ obi ụtọ na-efe efe.